हिरामोती खाने साङ्लेकिरा !!
फ्रेब्रवरी २१, २००९
-एस बी छन्त्याल, बेल्जियम- एक समय (जमाना) थियो-आकाशमा डोरीझैं लाग्ने, काउँ काउँ गर्दै उड्ने जिवलाई मैले प्रश्न गर्थें कि त्यो के हो आमा भनेर । प्रतिउत्तरमा साङ्लेकिरा हो । यसले हिरा मोती खान्छ, भन्ने सुन्दा यसलाई कसरी भेट्न...
लगातार गलत समाचार लेखिरहेछन दैनिक पत्रीका
फ्रेब्रवरी ४, २००९
नेपालका दैनिक पत्रीकाले लगातार गलत समाचार लेखिरहेका छन । त्यस्तो गलत समाचारपनि झन महत्वपूर्ण रिपोर्टझैं नामै उल्लेख गरेर (बाइ लाइन) लेख्नेहरुपनि उल्लेख्य मात्रामा छन । अरु पत्रीकाको त के कुरा गर्ने, नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा उत्क्रिष्ठ कान्तिपुरनै हो...
मान्छेलाई खान्की छैन गिद्दलाई रेस्टुरेन्ट !
फ्रेब्रवरी २, २००९
-रुपेन्द्र कर्माचार्य (तस्बिर र आलेख दुबै) पिठौली, नवलपरासी मान्छे खान नपाएर मर्न लागे गिद्दलाई रेस्टुरेन्ट ? सुन्दै टाउको तात्ने कुरा । रेस्टुरेन्ट मानिसकोलागि नभई गिद्धको लागि भन्दा अचम्म लाग्दैन त ? तर के गर्नु खोलिएको छ...
बर्ड फ्लुको खतरा: फिरन्ते चराबाट न्युन
जनवरी २७, २००९
-ददिराम सापकोटा अहिले नेपालमा बर्ड फ्लुको ठुलो त्रास फैलिएको छ । सरकारले बर्ड फ्लु नियन्त्रणगर्न पूर्वी नेपालबाट घरपालुवा पन्छीहरु भकाभक मार्न थालेको छ । यहिबेला बिभिन्न देशबाट नेपालमा फिरेन्तेका रुपमा आएका पन्छीबाट त्यो रोग घरपालुवा पन्छीमा सर्न...
आफन्तको स्वर ठ्याक्कै चिन्छन कागहरु
तपाई अमेरिका बस्नुस कि जापान । जतिसुकै टाढाबाटपनि फोनमा आमा बोलेको ठ्याक्कै चिन्नुहुन्न त ? काग हरुलेपनि त्यस्तै गरेर आफन्तहरुको बोली चिन्ने रहेछन । गत वर्ष गरिएको एक अध्ययनबाट यो पत्ता लागेको हो । बैज्ञानिक अध्यनबाट के...
कसलाई मतलव अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको यो तालको ?
जनवरी ९, २००९
चितवनको विस हजारी तालको हो यो फोटो । पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो हालतमा छ भन्ने कुरा त फोटोलेनै बताउँछ । सङ्लो पानी । हजारौं चराहरु चिर्बिराउने यो ठाउँ । थुप्रै गोहीहरु छेउमा गजधम्म परेर मुढो...
रस चुसेपछि छमछम नाच्छन माहुरी
डिसेम्बर ३०, २००८
रोदी र चौतारी को नाच के नाच ? ? तामाङ सेलो के खतरा ? नाच्न जाने जाबो मादल र बाँसुरी, तबला र मुर्चुङ्गा केहि नचाहिने रहेछ । नपत्याए माहुरीहरुबाट सिके हुन्छ । तिनलाई फूलको रस भेटेमात्रैपनि पुग्ने...
कसरि बन्छन स्त्री र पुरुष ?
अगस्ट ४, २००८
स्त्री र पुरुष । यि दुबै बन्छन उहि पुरुष उहि महिलाबाटपनि । पुरुषपनि उहि महिलापनि उहि । बच्चा हुर्किने पेटपनि उहि । तर उहि महिला र पुरुषबाटपनि कहिले केटो त कहिले केटि जन्मने किन ? रोचक छैन...